Home Wararka Qaramada Midoobay oo ka hadashay xaalada dagaal ee Muqdisho ka jirto
Qaramada Midoobay oo ka hadashay xaalada dagaal ee Muqdisho ka jirto
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa War kasoo saaray dagaaladii u dhexeeyay Ciidanka dowladda iyo kuwa taageersan Mucaaradka ee kasoo horjeeda muddo kordhinta Farmaajo oo shalay ilaa iyo xalay ka dhacayay Magaalada Muqdisho. Qoraal kasoo baxay Xafiiska UN-ka ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin isku dhacyada Ciidamada dowladda iyo kuwa Macaaradka ee ka dhacay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, kuwaasi oo la isku adeegsaday hubka Culus.
Qaramada Midoobay ayaa dhinacyada iska soo horjeeda ku boorisay inay muujinayaan is xakameyn, isla markaana la joojiyo dagaalka, iyagoona xusay in rabshadaha dhacaya aysan xal u aheyn is marin waaga siyaasadeed ee haatan taagan. “Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Waxaan ku boorrinaynaa dhinacyada oo dhan in ay muujiyaan is xakamayn” ayaa lagu yiri Qoraalka.
Qaramada Midoobay ayaa dowladda Federaalka iyo Mucaaradka ugu baaqday inay si deg deg ah u bilaabaan wada-hadal lagu joojinayo dagaaladii ka dhacay Magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay dhinacyada. “Rabshaddu xal uma ahan is mariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso ah dib ugu bilaabaan wadahadal degdeg ah” ayaa lagu soo gaba-gabeeyay Qoraalka Qaramada Midoobay.
Dhanka kale, khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaaladii ka dhacay Caasimadda, in kastoo aan si dhab ah loo xaqiijin inta uu la egyahay, waxaana weli la isku hor fadhiyaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen oo dhufeysyo laga sameeystay.